एकदमै दुब्लो पातलो साथै कमजोर महसुस गर्नुहुन्छ ? त्यसो भए यो चिज खानुहोस् – Annapurna Daily
On Sep 28, 2021 6,072
कसरी खाने ? हरेक दिन दुधमा साबुदाना मज्जाले पकाएर खीर बनाएर खाने गर्नुहोस्। यसले शरीरमा उर्जा प्रदान गर्नुका साथै जस्तोसुकै पातलो मान्छे पनि बलियो, मोटो र मजबुत हुन्छ। त्यस्तै दोस्रो चीज हो आलु। यसको लागि ३ ओटा ठुलो ठुलो आलु उमाल्ने। हरेक दिन यसरी उमालेको आलु खानुहोस्। आलुमा भरपुर मात्रामा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ जसले पातलो वा दुब्लो व्यक्तिलाई फुर्तिलो र स्फुर्त बनाई शरीरको तौल बढाउँछ।
यो पनि,एसिडीटीलाई जरैदेखि निर्मुल पार्न अपनाउनुहोस् यी उपाय, अनियमित र अनियन्त्रित खानपानका कारण आजभोलि मानिसलाई एसीडीटी र पेटसम्बन्धी कयौँ समस्याबाट पीडित हुने गर्दछन्। यदी तपाई पनि पेटसम्बन्धी समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ भने किचनमा उपलब्ध हुने चीजबाट पनि राहत पाउन सक्नुहुनेछ। आजहामी तपाईलाई एसीडीटी र पेटसम्बन्धी समस्याबाट छुटकारा पाउने केही घरेलु उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ।